Yintoni ithemba lomgangatho wePlastiki osandula ukunyuka?
Umgangatho weplastiki we-PVC ngenxa yokusebenzisa kwawo izinto zinokuphinda zisebenziseke okusingqongileyo kwi-PVC, ngokuhambelana nokuhamba kwendalo kwanamhlanje, kunokuthiwa lushishino lokuphuma kwelanga. Ukujonga phambili kwikamva, ukutyibilika kwiplastiki yePVC kuya kuba nendawo ebanzi yophuhliso. Umgangatho weplastiki wePVC uya kuthi ...
Ukunyuka okukhawulezileyo kwophahla we-PVC okanye kuya kutshintsha ipatheni ekhoyo yeshishini lokuthambisa?
I-PVC isetyenziswa ngokubanzi kumashishini amaninzi asezantsi, amelwe yimibhobho kunye neeprofayili. Ngokwezibalo zolwazi lweLongzhong, ekusetyenzisweni kwePVC ngo-2018, inani lemibhobho kunye neeprofayili yayiyi-27% kunye ne-24% ngokwahlukeneyo. Kwiminyaka yakutshanje, kodwa kukho imboni ...
Uqikelelo kunye nohlalutyo kwimeko yangoku kunye nophuhliso lwentengiso ye-China ye-PVC ngo-2020
I-PVC yenye yezona mveliso zinkulu ze-chlorine e-China, kunye nokusetyenziswa kwayo kwe-klorini i-40% yemveliso yeklorine iyonke e-China, kwaye yeyona mveliso iphambili yokulungelelanisa i-alkali chlorine balance. Ngokwedatha, ukuphela kuka-2019, amandla emveliso ewonke ...
ICanton Fair kwi-Intanethi
ngomphathi ku 20-08-21
Umboniso waseGuangzhou kumgca kaJuni 15-Jun. 25 Sinethuba lokuthatha inxaxheba kwi-Guangzhou Fair kaJuni 15-Jun. 25. ngeentsuku ezingama-20 zisebenza ngeenkcukacha zohlaziyo lweemveliso, ezinjengeefoto, ulwazi kunye neevidiyo ezinje, zenza uyilo olubonisa, kude kube kumsitho wokuvula, bekuxakekile ...
Malunga namaphephandaba aphesheya kwezilwandle kunye neemagazini zentengiso
Ngokuza konyaka omtsha we-2020, sidibene neCorvi-19, Fair kunye nomboniso wokumisa kwaye kananjalo awunakumema abantu bamanye amazwe ukuba batyelele umzi-mveliso wethu, ke, ibiyingxaki enkulu esidibene nayo kwimigangatho yokuthumela ngaphandle. Ngoncedo nenkxaso ye-HeBei GuoRui Information Technologe Co., ltd, sibhengeze yethu ...
Umgangatho, Ukuziva ukuxhasa isilwanyana kwiPet, PVC Sponge nokwadala, Umgangatho wekhaphethi, Umgangatho wesiponji, PVC Ikhaphethi,